स्वास्थ्य र रेचन – Chitwan Post
स्वास्थ्य र रेचन
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन २२, २०७०
[author image=”https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash2/1076810_100000897500391_1727240133_q.jpg” ]डा. आदर्श प्रधान [/author]अहिले विश्वमै मानिसहरु स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत हुन थालेका छन् । जतिजति अत्याधुनिक अस्पतालहरु बानिरहेका छन्, त्यत्तिकै अनुपातमा मानिसहरुलाई नयाँनयाँ रोग लाग्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । धेरैजसो रोगीहरु अस्पताल गएर पनि रोग ठीक भएको पाइँदैन । अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरणहरुबाट रोगको परीक्षण त हुन्छ, तर रोगीको रोग निदान अत्यन्त न्यून रुपमा भैरहेको छ । मेडिकल साइन्सले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गारिरहेको छ । त्यसैले त अहिले मेडिकल साइन्सले पनि “रोगलाई होइन, रोगीलाई उपचार गर्नुपर्दछ” भनेर धेरै रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार एउटै रोग लागेको दुई व्यक्तिहरुलाई गरिएको सम्पूर्ण परीक्षणमा एउटै समस्या देखियो, रिपोर्ट पनि एउटै निस्कियो । तर, दुवै रोगीलाई एउटै औषधिले ठीक पार्न सकेन । त्यसैले, उनीहरु रोगलाई भन्दा पनि रोगीलाई उपचार गर्नुपर्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।
शरीर र मनबीचको सम्बन्ध :
शरीर र मनबीच एकदम नजिकको सम्बन्ध छ । कुनै पनि कुरा मनमा हुन्छ भने उक्त कुराको असर शरीरमा देखा पर्दछ । त्यस्तै, कुनै पनि कुरा शरीरमा हुन्छ भने उक्त कुराको असर मनमा पर्दछ । धेरै रोगहरु शारीरिकभन्दा पनि मानसिक यानेकि मनबाट आएको हुन्छ । त्यसैले हामीले जति शरीर परीक्षण गराउँदा, औषधि खाँदा पनि निको हुन नसक्नुको कारण यही हो । मनमा केही हुनासाथ शरीरमा तत्कालै असर पुग्न जान्छ । हाम्रो मनमा दबेका विचार, वेगहरुबाट हाम्रो शरीरमा रोग लाग्ने गर्दछ । तर, हामी लक्षणको उपचार गरिरहेका हुन्छौँ । जबसम्म रोगको मूल कारणको उपचार हुँदैन, तबसम्म रोग बल्झिरहन्छ । अतः रोगको मूल कारण त हाम्रै मन हो । त्यसैले, मनको बिरामीले गर्दा हाम्रो शरीरमा रोगका ग्रन्थी पैदा गरिदिन्छ । उक्त अनावश्यक ग्रन्थीले शरीरको रक्तसञ्चारदेखि लिएर शरीरका अंगहरुले गर्ने कार्य क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ । यसरी हाम्रो शरीरमा रोग बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा शरीरमा पीडा हुन सक्दछ र शरीरमा विभिन्न संवेदनाहरुको चलखेल हुन सक्दछ । हामी छुट्याउन सक्दैनौँ कि यो समस्या शरीरबाट उब्जेको कि मनबाट ? सुरूमा हामी उपचारका लागि अस्पताल जान सक्छौँ, तर उपचारले लाभ भएन भने हामीले मनबाट आएको रोग भनेर जान्न सक्दछौँ ।
मनलाई सफा गर्ने विधि– ‘रेचन’ :
रेचन यानेकि कैथारसिस अहिलेको मानिसहरुलाई अति आवस्यक विधि हो । यो विधि कुनै सिद्धान्त, धर्ममा आधारित छैन । यो प्रयोगको लागि बनाएको प्राकृतिक विधि हो ।
हाम्रो शरीरमा चेतन वा अचेतन रुपमा हजारौँ संवेदना, भावहरु दबेका हुन्छन् । उक्त कुराहरु मनबाट निकाल्ने क्रिया नै रेचन वा कैथारसिस हो । बच्चाहरुलाई कुनै कुरा मन परेन वा माग पूरा भएन भने उनीहरु तत्कालै रोएर, कराएर, चिच्याएर आफ्नो पीडालाई बाहिर फालिदिन्छन् । त्यसैले उनीहरु केही क्षणमै खुशी भएर बोल्न थाल्दछन् ।
हामीलाई केही कुरा मन परेन भने न त रून सक्छौँ, न त कराउन नै सक्छौँ । हामीलाई समाजले के भन्ला भन्ने डर हुन्छ । हाम्रो दिनचर्यालाई होसपूर्वक हेर्ने हो भने हजारौँ विचारहरुलाई दबाएका हुन्छौँ । त्यसैले, हामी कहिल्यै मानसिक रुपमा स्वस्थ हुन सकेका हुँदैनौँ ।
रेचन गर्ने तरिका:
– रेचनका लागि फुर्सद भएको कुनै दिन पारेर कोठा बन्द गरेर एक्लै बस्न सकिन्छ ।
– आफूलाई होसपूर्वक नियाल्ने । शरीरमा के भइरहेको छ जान्ने ।
– मनमा के भैरहेको छ भनेर हेर्ने । प्रत्येक क्रियाकलापलाई स्वीकार भावले हेर्दै जाने गर्नुपर्दछ ।
– शान्त भएर हेर्दै जाने । त्यतिबेला शरीर आफैँ चल्न खोज्ने, कम्पन हुन खोज्ने आदि हुन सक्छ । कोहीलाई रून, चिच्याउन, कराउन मन लाग्ने पनि हुन सक्छ । जे गर्न मन लाग्छ, गर्दै जाने । कुनै कुरालाई रोक्नुपर्दैन ।
– त्यसपछि शान्त भएर बस्ने ।
रेचन विधि अत्यन्त सरल वैज्ञानिक विधि हो । मानिसहरुलाई यस्तो सरल विधिले पनि ठूलो काम गर्न सक्छ भन्ने शंका पनि लाग्न सक्दछ । रेचन महिनाको एकचोटि प्रत्येक मानिसहरुलाई गर्न जरूरी छ । एकचोटि गर्दा सफलता नमिल्दैमा हतारिनु पर्दैन, गर्दै गएमा यसले मानिसको चेतनासम्मलाई रुपान्तरण गर्न सक्दछ । रेचन गरिसकेपछि मनभित्रको दबेको कुण्ठाका भावहरु निक्लिने र शरीरको नचाहिने ग्रन्थीहरु पनि विसर्जन हुने भएकाले पुराना रोगहरु पनि सजिलै निको हुन सक्दछन् ।
रेचन क्लब आवश्यक :
अहिले विभिन्न क्लबहरु बनाउने होड चलेको बेला रेचनलाई पनि क्लब बनाएर सामूहिक प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त यसले स्वास्थ्य सुधारमा क्रान्ति ल्याउन सक्दछ । यसलाई धर्म, दर्शनसँग नजोडेर वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण दिँदै जाने हो भने स्वास्थ्यमा मात्र होइन, आध्यामिक यात्रामा पनि ठूलो सहयोग मिल्दछ ।